Magacyada Shantii Xidig ee qiimaha Badan lagu Iibsaday ee lagu qasaaray!! - Horseed Media
Magacyada Shantii Xidig ee qiimaha Badan lagu Iibsaday ee lagu qasaaray!! December 13, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogleHadii Heshiiskii uu Macalin Sir Alex Ferguson kula soo wareegay horaantii xili Ciyaareedkan Robin Van Persie oo ahaa Kabtankii hore ee Kooxda Arsenal uu ku guuleestay , Alex Sanches ne uu si fiican ula qabsaday kooxda Barcelona markii Laga soo iibsaday Kooxda Udinesse , Inter Milan ne ay ku macaashtay Heshiiskii ay kula soo wareegtay Diego Milito oo Genao kaga soo biiray markii uu dhaliyay in ka badam 50 goal ,balse waxaa jiro kooxo fara badan shaleyto iyo qoomamo ka taagan heshiisyo ay Lacago fara Badan ku bixiyeen oo ay kula soo wareegeen xidigo Caan ah.
Jonathan Woodgate waxa uu ka tegay Newcastle United ku biiray Real Madrid Lacag dhan $22 Million (2004).
Adrian Mutu :Wuxuu ka tegay Parma kuna biiray Chelsea qiimo dhan $26 Million (2003)
Parma ayaa ka macaashtay heshiiskii ay Chalsea kaga iibisay sanadkii 2003-dii Xidigii Hore ee Kooxda Inter Adrian Mutu , markii uu London ku aaday Aduun Lacageed oo dhan $26 Million.
Juan Sebastian Veron Waxa uu ka tegay Lazio kuna biiray Manchester United qiimo dhan $37 Million (2001)
Andriy Shevchenko Wuxuu ka tegay AC Milan kuna biiray Chelsea qiimo dhan $50 Million dollars (2006) Heshiiyadii waalida ahaa ee lagu qasaaray waxaa ka mid ahaa kii ay Kooxda Chalsea kula soo wareegtay xidigii hore ee Kooxda Ac Milan iyo xulka Ukraine Andriy Shevchenko.
Zlatan Ibrahimovic Wuxuu ka tegay Inter Milan , kuna biiray Barcelona qiimo dhan $100 (2011)
La Soco dhowaan qormo kale oo xiiso badan oo ka hadleyso Xidigii lagu macaashay Heshiisyadooda.